MAKEUP BASE | CosmeticMyanmar
Home » မိတ်ကပ် / Make Up » MAKEUP BASE
Make up factory Make up Base လေးကိုသင့်မျက်နှာနဲ့ မိတ်ကပ်ကြားမှာ make up base အလွှာပါးပါးလေးတလွှာခြားလိုက်ရုံနဲ့အဆီပြန်ခြင်းကို အထူးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းထားပီးမကြာခင်မှာ oxidize ဖြစ်ပီး မိတ်ကပ်အရောင်ပြောင်းခြင်း၊မိတ်ကပ်မညီခြင်း၊ မိတ်ကပ်သားမတက်ခြင်းများကိုလုံး၀မဖြစ်စေတော့ဘဲ မိတ်ကပ်သားကို နှစ်ဆကြာရှည်ခံပီးမိမိအလှတွေပိုပိုတိုးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ gel ဆိုတဲ့အတိုင်း လိမ်းလိုက်တာနဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို ဂျယ်လီတုံးလေးလိုအိစက်ညက်ညောသွားစေပါပြီး နူးညံ့ချောမွေ့သွားစေပါတယ်။
မျက်ဝန်းတဝိုက်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေမဲ့ Eye Gel!
နေရာစုံကြိုက်သလိုခြယ်သနိုင်မဲ့ Prismatic Pearl Multistick!
Tags: MAKEUP BASE